Iyi inyaya yechitatu uye yekupedzisira chinyorwa muzvikamu zvitatu-zvakateedzana. Chinyorwa chekutanga chakatsanangura kugadziriswazve kutakurwa kwekutakura uye basa rayo mukutenga, chinyorwa chechipiri chakatsanangura zvakanakira hupfumi uye zvakatipoteredza zvekushandiswazve trans ...
Ichi chinyorwa chechipiri mune matatu-chikamu akateedzana naJerry Welcome, aimbova purezidhendi weReusable Packaging Association. Chinyorwa chekutanga ichi chakatsanangura kugadziriswazve kutakura kwekutakura uye basa rayo muketani yekupa Chinyorwa chechipiri ichi chinotaura nezve hupfumi nemagariro ...
Ichi ndicho chinyorwa chekutanga mune matatu-chikamu akateedzana naJerry Welcome, aimbove purezidhendi weReusable Packaging Association. Chinyorwa chekutanga ichi chinotsanangura kugadziriswazve kutakura kwekutakura uye basa rayo muketani yekupa. Chinyorwa chechipiri chichataura nezve hupfumi uye env ...
Nei kuraswa kwedonje tauro kuchidikanwa?
Disposable matauro ekumeso anoraswa zvigadzirwa zvekuchenesa, zvakagadzirwa nekotoni fiber, yakapfava magadzirirwo, kuomarara, uye isina-chinhu. Maitiro ekushandisa akasiyana, senge kugeza kumeso, kupukuta kumeso, kubvisa poda, kukwesha, nezvimwewo. Ine hutsanana uye yekuchenesa mhedzisiro. Disposable kumeso Taw ...
Ndeapi akasarudzika maficha emavhiri anovhara akagadzirwa nema pp cellular board?
Isu veLonovae tine mitsara miviri yekugadzira kukwevera zinga reuchi. Huwandu hwezuva nezuva hunogona kusvika kumatoni 16-17. Uye izvo zvikonzero zvatinosarudza iyo pp zinga rejecha panzvimbo yemamwe makadhi kana mapango mapango ndiyo yakanakisa mhando uye inoita ...
Nei kuwanda uye kwakawanda automotives inogadzira sarudza PP Cellular bhodhi bhokisi?
Nei kuwanda uye kwakawanda automotives inogadzira sarudza PP Cellular bhodhi bhokisi? Mapurasitiki pallet mabhokisi imhando yebhokisi rakagadzirwa nemaoko emaoko, jekiseni rakajowa uye pallet. Mabhokisi akagadzirwa nematanda pakutanga. Uye zvakawanda fekitari zvibereko pl ...